सामाजिक संजालमा किन भाइरल हुँदैछिन् यी शिक्षिका ? , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सामाजिक संजालमा किन भाइरल हुँदैछिन् यी शिक्षिका ?
डिसी नेपाल , ९ भाद्र २०७४
एजेन्सी। मलेसियाकी जस जफारी पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भइरहेकी छिन् । उनको फोटो विभिन्न सामाजिक संजालमा निकै शेयर गरिएको छ । उनको लोकप्रियताको कारण उनको सुन्दरता र उनको पहिरनको स्टाइल हो ।
जश पेशाले शिक्षिका हुन् र उनी सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा पनि निकै सक्रिय रहन्छिन् । निकै कम समयमा यिनका फलोअरको संख्या २९ हजारभन्दा बढी भइसकेको छ । उनको उमेरको अहिलेसम्म खुलासा भएको छैन । तर एक वेबसाइटले जनाएअनुसार जश आफ्ना विद्यार्थीभन्दा कम उमेरकी देखिन्छिन् ।
यतिमात्र होइन आफ्ना छात्रहरुसँग उनको सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको बताइएको छ । उनी सधैं आफ्नो परम्परागत पहिरनमा देखिन्छिन् । उनको फोटो हेर्दा भने उनी निकै फेशनेबल भएजस्तो देखिन्छ । जशले ग्र्याजुएसन गर्दैछिन् र उनी फ्रिलान्स मोडल पनि हुन् ।